Vacuum Concentrator, Electroplated Paddle Dryer, Nereza Dryer - Yanjialong
DW dzino kuroora rukoko bhandi Dryer
Single zvazviri wastewater evaporator
Single zvazviri wastewater evaporator kushandiswa: michina iyi zvakakodzera mishonga, utachiona, zvokudya, zvemakemikari nezvimwe maindasitiri, uye rinowanzoshandiswa kwemvura tsika Chinese mushonga atakatora, muchero facial, nemicheka makemikari zvinogadzirisa, etc. Features: a. Compact marongerwo nezviduku uriri nharaunda. Nemazvo makorari mukati nokunze midziyo, maererano GMP zvinodiwa. b. The midziyo dzinowanzotsigi- rinoumbwa rimwe hita, mumwe separator, mumwe defoamer, mumwe condenser uye zvakafanana. d ....
YZGFZG dzino Vacuum Dryer
YZG / FZG akatevedzana Vacuum Dryer Introduction: The anonzi Vacuum nokuomesa kuti aome mashoko pasi Vacuum ezvinhu, uye kana Vacuum Pombi inoshandiswa kupomba uye dehumidifying, kuomesa mwero iri nokukurumidza. Note: Kana condenser rinoshandiswa, kuti solvent iri zvinhu zvinogona akapora kubudikidza condenser; kana SK akatevedzana mvura mhete Vacuum pombi rinoshandiswa, kuti condenser chinogona kusiyiwa, achiponesa simba inivhesitimendi. chigadzirwa rondedzero: YZG / FZG akatevedzana Vacuum Dryer ndezvaiye kunofambira mberi Vacuum Dryer. The Dr ...
Vacuum decompression concentrator First, kukura kwebasa chikumbiro michina iyi ndiyo yakakodzera wevasungwa emura iri mishonga, zvokudya, zvemakemikari nezvimwe maindasitiri, uye kunogona kushandiswa sezvo doro kupora uye nyore reflux dzokubudisa. The zvikamu neVadzidzi zvinoshandiswa akagadzirwa Stainless simbi, ine zvakanaka ngura nemishonga uye asangana GMP nemitemo. Chechipiri, midziyo akafanana The midziyo dzinowanzotsigi- rinoumbwa wevasungwa tangi huru muviri, ane mhute-mvura ...
Double zvazviri concentrator
Double zvazviri concentrator First, kukura kwebasa chikumbiro The concentrator zvakakodzera wevasungwa kuti mvura akadai zvetsika Chinese mushonga, mushonga yokumadokero, shuga, starch, monosodium glutamate, nomukaka zvigadzirwa, makemikari, nezvimwewo, uye kunyanya akakodzera yakaderera tembiricha Vacuum wevasungwa nokupisa nzwisisa zvinhu. Vakanyatsoongorora kukarukureta uye nokungwarira design, kambani yedu ine zvakawanda kupfuura pakutanga zvinhu. Chechipiri, midziyo akafanana miviri kushanda ...
Three-zvazviri concentrator First, kukura kwebasa chikumbiro The concentrator zvakakodzera wevasungwa kuti mvura akadai zvetsika Chinese mushonga, mushonga yokumadokero, shuga, starch, monosodium glutamate, nomukaka zvigadzirwa, makemikari, nezvimwewo, uye kunyanya akakodzera yakaderera tembiricha Vacuum wevasungwa nokupisa tisanzwe zvinhu. Vakanyatsoongorora kukarukureta uye nokungwarira design, kambani yedu ine zvakawanda kupfuura pakutanga zvinhu. Chechipiri, midziyo akafanana The-chaizvoizvo matatu C ...
Idenderedzwa concentrator First, kukura kwebasa chikumbiro michina iyi ndiyo yakakodzera wevasungwa emura iri mishonga, zvokudya, zvemakemikari nezvimwe maindasitiri, uye kunogona kushandiswa sezvo doro kupora uye nyore reflux dzokubudisa. The zvikamu neVadzidzi zvinoshandiswa akagadzirwa Stainless simbi, ine zvakanaka ngura nemishonga uye asangana GMP nemitemo. Chechipiri, midziyo akafanana The midziyo dzinowanzotsigi- rinoumbwa wevasungwa tangi huru muviri, ane mhute-mvura separator, ...
Coil Vacuum concentrator First, kukura kwebasa chikumbiro The mudziyo zvakakodzera wevasungwa emura zvinhu zvakadai zvetsika Chinese mushonga, mushonga yokumadokero, zvokudya, monosodium glutamate, dheri, shuga, starch, muto, zvemakemikari uye zvakafanana. Chechipiri, midziyo akafanana The mudziyo chinhu cylindrical chisimbiso mudziyo ane kumbogadzirwa kuti mudziye bhachi, iyo kupukuta ane nyore uye vakarongeka hydraulic ejector. The midziyo iri muzvikamu zvitatu, kuti kwemvura chambe ...
Alcohol kupora concentrator
Alcohol kupora concentrator First, kukura kwebasa chikumbiro michina iyi zvakakodzera mishonga, utachiona, zvokudya, zvemakemikari nezvimwe maindasitiri. It rinowanzoshandiswa kwemvura tsika Chinese mushonga atakatora, nemicheka makemikari zvinogadzirisa, etc. Hazvina kunyanya akakodzera kwemvura uye kuzoita zvinoita zvokufembedzwa. Chechipiri, midziyo akafanana The midziyo dzinowanzotsigi- rinoumbwa munhu hita, imwe evaporator, imwe defoamer, miviri condenser, mumwe unotonhorera, imvura kugamuchirwa da ...
Kushanda musimboti wematatu-mhedzisiro evaporator yemvura ine munyu yakawanda
Iyo mitatu-mhedzisiro evaporator mhando yekubvisa uye yekuisa midziyo, iyo inoshandiswa zvakanyanya mukushanduka kwemvura uye kusimbisa maitiro emvura zvinhu zvakaita semishonga, makemikari, chikafu, uye indasitiri yechiedza. Iyo chaiyo yekudziya nguva ipfupi, iyo evaporation yekumhanya inokurumidza, t ...
Iyo oxygen cylinder uye musika we concentrator uchaona kukura kwepasirese kwazvo muna 2019-2025
Musika tarisiro yemakirinda e okisijeni uye ma concentrator, kuongororwa kwakazara uye zvikamu zvikuru zvemusika uye fungidziro, 2019-2025. Oxygen cylinders uye concentrator misika mishumo ndiyo yakakosha sosi yedata kune vezvebhizinesi masisitimu. Inopa kuongororwa kwekukura kwemusika kune iyo indasitiri pamusoro ...
Kuongorora uye kuenzanisa kwezvakanakira nekuipira kwekudonha kwemafirimu evaporator
Kudonha firimu evaporator imhando yepamusoro-inoshanda evaporation michina, iyo pamwe chete inonzi yakatetepa firimu evaporator pamwe nekumuka kwefirimu evaporator uye yakadzurwa firimu evaporator. Mutete wefirimu evaporator ane zvakakosha uye anoshandiswa zvakanyanya mumakemikari, mwenje maindasitiri uye foo ...
Musimboti wekumanikidzwa kutenderera evaporator
Iko kumanikidzwa kutenderera evaporator ndeye evaporator inovimba nesimba rekunze kutenderera. Iyo yekumanikidza kutenderera evaporator inokodzera zvakanyanya kuve kwemvura yecrystallinity, kusvibisa, kukwirira kwevasungwa, kukwirira viscosity, uye insoluble yakasimbiswa yakasviba mvura uye marara emvura. concentrate. ...
Iko kuvapo uye basa reMVR evaporator
MVR evaporator imhando nyowani yepamusoro-inoshanda uye yekuchengetedza-simba yekupusha michina inonyanya kushandiswa muindasitiri yemishonga. Iyo michina inoshandisa yakaderera-tembiricha uye yakaderera-kumanikidza yekupisa tekinoroji uye yakachena simba kuti ibudise steam senge simba rekuparadzanisa mvura iri pakati. Icho chiri mu ...
© Copyright - 2010-2022: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - AMP Mobile
Imwe Mhedzisiro Vutavhi Concentrator , Single rukoko Mesh Belt Dryer, Double Effect Concentrator , Imwe Mhedzisiro Concentrator ,